Mpanamboatra sy mpamatsy ny fiterahana sy ny fitondrana vohoka - China Fertility & Pregnancy Factory
Fitaovana fanandramana haingana PROM
Fitaovana haingam-pandeha PROM 500150 santionany: Fiteny swab: anglisy anglisy: 01 daty mahomby: 2015-05 Ho an'ny fampiasana diagnostika in vitro ihany. FAMPIASAANA INDRINDRA Ny fitsapana StrongStep® PROM dia fanadinana immunochromatograpical qualitative ho an'ny fikarohana ny IGFBP-1 avy amin'ny tsiranoka amniotique ao an-tsokosoko mandritra ny fitondrana vohoka. Natao ho an'ny fampiasana matihanina ny fitsapana mba hanampiana amin'ny famaritana ny fahatapahan'ny fonon-jaza (ROM) amin'ny vehivavy bevohoka. FAMPIDIRANA Ny concentra ...
Fitaovana fitsapana haingana an'i Fetib Fibronectin
Fetal Fibronectin Rapid Test Device 500160 Fakan-tahaka: Swab Language: English Version: 01 Daty mahomby: 2015-05 Ho an'ny fampiasana diagnostika vitro irery ihany. FAMPIASANA NTENDED Ny fitsapana StrongStep® PROM dia fanadinana immunochromatographic voadinika maso natao hampiasaina amin'ny fitiliana kalitao ny fibronectin am-bohoka ao anaty tsiranoka cervicovaginal. Ny fisian'ny fibronectin am-bohoka ao anaty tsiranoka cervicovaginal eo anelanelan'ny 22 herinandro, 0 andro sy 34 herinandro, 6 andro fihetseham-po dia ...
Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana, Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19, H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus, Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket,